Uncategorized | linyeikhtin
ၿပီးရင္ေတာ့ “ရပါတယ္” “အဆင္ေျပပါတယ္” လို႔ ညာေျပာမယ္။
ပြီးရင်တော့ “ရပါတယ်” “အဆင်ပြေပါတယ်” လို့ ညာပြောမယ်။
This entry was posted in Uncategorized on July 10, 2017 by linyeikhtin.
This entry was posted in Uncategorized on April 24, 2017 by linyeikhtin.
ၫႊတ္ ယိမ္း ႏြဲ႔ ေကြး
ရွိန္း ပူ ခ်ိဴ ျမ
ညွှတ် ယိမ်း နွဲ့ ကွေး
ရှိန်း ပူ ချိူ မြ
This entry was posted in Uncategorized on September 24, 2016 by linyeikhtin.
(၁) ‘မိန္းမတို ့အသက္ ကရမက္ ‘ ဟု ဆိုး႐ိုးစကားရွိ ပါတယ္။ ေသြးဆံုးကုိင္ျခင္းအတြက္ ကရမက္ကို လိမ္းေပးသင့္သလို၊ ေသြး၍ ေသာက္သံုးေပးပါ။
(၁၁) ပဲေနာက္ကို ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ဟင္းခ်ဳိခ်က္ေသာက္ပါ။
(၁၅) ရဲယိုသီးမွည့္မွည့္ကို ထန္းလ်က္ခဲ (သဘာဝအမည္းေရာင္ ထန္းလ်က္ခဲ) ျဖင့္ ေခါက္၍ စားပါ။
ျပဳပါတယ္။ (ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ ဘာလီျမက္ႏု အခ်ဳိရည္တို႔ကို City Mart ဆိုင္ေတြမွာ ဝယ္ယူရရွိ နိုင္ပါတယ္။)
(၂ဝ) တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈဂ႐ုစိုက္ပါ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္လြန္၍ ေရခ်ဳိးျခင္းမျပဳရ။
အမျိုးသမီးများ ပျမ်းမှျ အသက် (၄၇)နှစ် ဝန်းကျင်ခန့်မှာ သွေးဆံုးကိုင်ဝေဒနာကို စတင်ခံစား လာရတတ်ပါတယ်။ (မိခင်သွေးဆံုးခဲ့သော အသက်အရွယ်ကိုကြည့်၍လည်း မိမိသွေးဆံုးနိုင်မည့်အချိန်ကို ကြိုတင်မှန်းဆလို့ရပါတယ်) အောက်ပါ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အိမ်တွင်းကုထံုးလေးများက သွေးဆံုးကိုင်ဝေဒနာကို ဘေးဥပါဒ်ကင်းစွာဖြင့် သက်သာ
(၁) ‘မိန်းမတို ့အသက် ကရမက် ‘ ဟု ဆိုးရိုးစကားရှိ ပါတယ်။ သွေးဆံုးကိုင်ခြင်းအတွက် ကရမက်ကို လိမ်းပေးသင့်သလို၊ သွေး၍ သောက်သံုးပေးပါ။
(၂) မိုးဥတုတွင် ပေါ်တတ်သော ဂံုမင်းပင်ကို ဟင်းခါး ချက်၍သောက်ပါ။
(၃) စွယ်တော်ပင်(ခရမ်းရောင်ပန်းပွင့်) ၏ အရွက်
ညွန့်ကို ဟင်းချိုချက်သောက်ပါ (သို့မဟုတ်) ရွက် ပြုတ်ရည်သောက်ပါ။
(၄) အနက်ရောင်စပျစ်သီးမှည့်ကို အခွံရော အစေ့ပါ ဝါးစားပါ။
(၅) ဆီးဖြူသီး စားပါ။
(၆) ထန်းရည်ချိုစစ်စစ်ကို တဝကြီးသောက်ပေးပါ။
(၇) ကြိတ်မှန်ရွက်စားပါ (သို့မဟုတ်) ကြိတ်မှန်ရွက် ယိုထိုးစားပါ။ (ကြိတ်မှန်ရွက် ၂၅ ကျပ်သားကို
ရေစင်စင်ဆေး နုတ်နုတ်စဥ်းပြီး၊ ထန်းလျက်သန့် သန့် ၁ဝ ကျပ်သား၊ အရည်ညှစ်ပြီး ရှောက်သီး
အဖတ် ၁ဝ ကျပ်သား၊ ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်
သွန်နီ ၁ဝ ကျပ်သား၊ စမံုငါးပါးအမှုန့်၂ ပဲသားစီ
တို့ကို မြေအိုးအသစ်ထဲရော၍ ဆားနှင့် ရေသင့်ရံု ထည့်ပြီး ယိုထိုးသလို ကျိုချက်ပါ။ ယိုဖြစ်ပါက ပုလင်းသန့်သန့်ထဲထည့်၍ အစာနှင့်ဝေးချိန် နံနက်၊ နေ့၊ ည သံုးကြိမ်စီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းမှျ ခပ်၍စားပါ။)
(၈) အဝါရောင် ကန်စွန်းဥကို များများပြုတ်စားပါ။
(၉) သငေ်္ဘာသီးမှည့် နေ့စဥ်စားပေးပါ။
(၁ဝ) တရုတ်စကားပွင့်ကို ကြော်ချက်၍ စားပါ။
(၁၁) ပဲနောက်ကို ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ဟင်းချိုချက်သောက်ပါ။
(၁၂) ဝါစေ့ပင်ပေါက်ကို ဟင်းခါးချက်သောက်ပါ။
(၁၃) ကင်ပွန်းချဥ်ရွက်ကို အမျိုးမျိုးလုပ်၍ ဟင်းချက် စားပေးပါ။
(၁၅) ရဲယိုသီးမှည့်မှည့်ကို ထန်းလျက်ခဲ (သဘာဝအမည်းရောင် ထန်းလျက်ခဲ) ဖြင့် ခေါက်၍ စားပါ။
(၁၆) အဆီများတဲ့အသား၊ ဖြူဆွတ်ဆွတ်သကြားမှုန့်
များ၊ ဆီကြော်မုန့်များ၊ ကဖိန်းဓာတ်များသော ကော်ဖီနှင့် ကိုလာအချိုရည်များ၊ ငရုတ်သီးအပူ အစပ်များ၊ ပူပူလောင်လောင် ဟင်းရည်များ စသည်တို့ကို လွန်ကဲစွာစားသောက်ခြင်းမှရှောင် ပါ။
(၁၇) အဆီများတဲ့ငါး (သို့မဟုတ်) ငါးကြီးဆီစားပါ။ Spirulina ခေါ် စိမ်းပြာရေညှိ(သို ့မဟုတ်) EPO
(ခေါ်)ရွှေဝါရောင် Evening Primrose ပန်း အဆီ(သို့မဟုတ်) Silica စီလီကာ ဆေးတို့ကို
(၁၈) Barley Grass (ခေါ်) ဘာလီမြက်နုထဲမှာ ဓာတ် တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေက များစွာကောင်းကျိုး
ပြုပါတယ်။ (နိုင်ငံခြားဖြစ် ဘာလီမြက်နု အချိုရည်တို့ကို City Mart ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူရရှိ နိုင်ပါတယ်။)
(၁၉) နေ့စဥ်မှန်မှန်လမ်းလှေျာက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားလုပ်ပါ။
(၂ဝ) တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဂရုစိုက်ပါ။ သို့သော် အချိန်လွန်၍ ရေချိုးခြင်းမပြုရ။
This entry was posted in Uncategorized on August 3, 2015 by linyeikhtin.
မပူ မေအး အရာရာတိုင္းကေႏြးေထြးလို႔…။
မပူ မအေး အရာရာတိုင်းကနွေးထွေးလို့…။
This entry was posted in Uncategorized on June 16, 2015 by linyeikhtin.
ေကာင္ေလး- ငါကကမာၻဆို နင္ကငါ့အတြက္ေတာ့ ေနမင္းတစ္စင္းပါဟာ။
ေကာင္မေလး- အစဥ္အၿမဲ အလင္းေရာင္ေပးႏိုင္ၿပီး နင့္ကိုေႏြးေထြးေစတယ္ဆိုပါေတာ့။
ေကာင္ေလး- အဲဒါထက္ ပိုေလးနက္တဲ႔ ရည္ညႊန္းခ်က္ရွိေသးတယ္။
ေကာင္ေလး- ငါနဲ႔နင့္ၾကား မိုင္ေပါင္း၉၂၉၃၅၇၀၀ျခားေနရင္ ငါ့ဘဝခုထက္ပိုၿပီးေအးခ်မ္းမွာဟ။
This entry was posted in Uncategorized on March 19, 2015 by linyeikhtin.